Michael Owen ” Jack Grealish kuma Haboona Kooxda Manchester City “ | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Michael Owen ” Jack Grealish kuma Haboona Kooxda Manchester City “
Michael Owen ” Jack Grealish kuma Haboona Kooxda Manchester City “
Michael Owen ayaa sheegay in uu taageere weyn u yahay Jack Grealish laakiin uu ka walaacsan yahay in 100ka milyan ginni ee ay ku soo iibsadaan aysan ku habboonayn qaabka kubadda cagta Manchester City.
Grealish ayaa soo bandhigay qaab ciyaareed kale oo hoos u dhacay intii lagu jiray guushii 4-1 ahayd ee Manchester City ay kaga badisay Club Brugge habeenkii Arbacada, waxaana dad badan ay su’aal galiyeen inuu la jaanqaadi karo kooxda Pep Guardiola.
Owen waxa uu qirtay in Grealish aanu ‘ku haboonayn’ Citizen’s maadaama uu diirada saarayay ku guulaysiga laadadka xorta ah ee saddexaad ee ugu dambeeya. Si kastaba ha ahaatee, Rio Ferdinand ayaa aaminsan in kabtankii hore ee Aston Villa uu ku waari doono Guardiola ka dib markii uu bartay ‘Wadadada City’.
Isagoo hadlayay ka dib kulankii Manchester City ee Champions League ee Club Brugge habeenkii Arbacada, Owen wuxuu yiri: “Waxaan taageere weyn u ahay Jack Grealish. Waan jeclahay isaga.
“Waxan u malaynayaa in uu geesi yahay oo uu cadaadiska iska qaadidoono Waa mid gaar ah. Waxa uu noqon doonaa mid guulaysta sababtoo ah waa ciyaaryahan aad u fiican oo ka ciyaara koox aad u fiican, laakiin miyuu noqon doonaa mid wanaagsan taaai ayuu Su’al galiyay Owen.
Previous articleXagee ayey marayaan wada-hadallada lagula jiro Ahlu Sunna?
Next articleJesse Lingard iyo Jadon Sancho oo halis ugu jira inay ka Baxaan Liiska Macalin Gareth Southgate
Tababaraha Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa xaqiijiyay in Anthony Martial uusan qeyb ka ciyaarin kulankii Leicester City sababo la xiriira dhaawac soo...
Boqor Maxamed Jaamac oo shaaciyey mas’uuliyiin dal kale kasoo qaaday lacag...
Jadwalka kuraas ka mid ah golaha shacabka oo la shaaciyey iyo...
Wararkii ugu dambeeyey doorashada HirShabelle ee Golaha Shacabka
Inter Milan oo guul ka gaartay Venezia iyo Juventus oo Garoonkeeda...